Wasiir dowlaha kaluumaysiga Puntland oo shirkadaha wax soo saarka Badda u jeediyay in ay ka faa’iidaystaan tamarta cadceedda – Kalfadhi
Somali vendors offload a catch from fishing boats at Bosaso beach in Puntland northeastern Somalia, on December 17, 2016. Fishermen bring fish to the market for traders as they buy fish to resell it in the market of Bosaso. / AFP / Mohamed ABDIWAHAB (Photo credit should read MOHAMED ABDIWAHAB/AFP/Getty Images)
Wasiir dowlaha Kalluumaysiga Puntland Cabdiqani Geelle Maxamed ayaa u jeediyay shirkadaha yar yar ee kaluumaysiga in ay ka faa’iidaystaan tamarta cadceeda, si ay qaboojin ugu helaan wax soo saarkooda.
“Waxaan ku dhiirigelinayaa reer Puntland in ay isu taagaan sidii ay u bedeli lahaayeen noloshooda, waxna uga bedeli lahaayeen habka khayraadka badda looga faa’iidaysan lahaa” Ayuu yiri Cabdiqani.
Wasiirka ayaa sheegay in abaaro daba-dheeraaday ay soo noq noqdeen, sidaas darteedna ay muhiim tahay in la xoojiyo suuqyada kalluumaysiga si dadku dhinacaas ugu guuro.
Dhaqaale xoog leh ayaa kalluumaysatada uga baxa shidaalka ay matoorada u isticmaalaan oo aad qaali u ah, taas oo keenta in aysan ku dhiiran in ay kordhiyaan wax soo saarkooda Badda maadama aysan helayn meel ay ku qaboojiyaan.